बिहान खाली खुट्टा हिड्नुका यस्ता छन् फाइदा, जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
नांगै पैताला अर्थात खाली खुट्टा हिँड्दा पैतालामा भरपूर मात्रामा अक्सिजन प्राप्त हुन्छ । यसले रक्तसञ्चार सहज गराएर थकान कम गराउँछ ।
बिहान नांगो पैताला जमिनमा हिँड्दा पनि कैयौँ फाइदा हुने अध्ययनले देखाएको छ । विशेषज्ञहरूले यसलाई अर्थिङ सिद्धान्त नाम दिएका छन् ।
लन्डनको वेस्टर्न युनिभर्सिटीका हेल्थ लेक्चरर गिलियन मेन्डिचका अनुसार प्रकृतिको सम्पर्कमा नांगो पैताला पैदल हिँड्नेहरूमा रक्तचाप र तनाव नियन्त्रित गर्ने हर्मोन सन्तुलित हुन्छ । अध्ययनका अनुसार जमिनमा पाइने कतिपय लाभदायी ब्याक्टेरियाले तनाव कम गर्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छन् ।
विशेषज्ञहरूले मानव शरीरका सबै कोषिका र तन्तुमा जमिनको अर्थिङ प्रभाव पर्ने जनाएका छन् । धर्तीको ऊर्जा चक्रले शरीरको विद्युतीय तन्त्रमा अनुकूल–प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उनीहरूको अध्ययनले देखाएको छ ।
नांगो पैताला धर्तीमा हिँड्दा पैतालामा भरपूर अक्सिजन प्राप्त हुने, रक्तसञ्चार राम्रो हुने, मांसपेशी सक्रिय हुने, धर्तीको पूरा ऊर्जा शरीरमा सञ्चारित हुने विज्ञहरूको तर्क छ ।
उनीहरूले जोर्नीको दुखाइ, अनिद्रा र मुटुसम्बन्धी समस्यामा पनि यो फलदायी हुने बताएका छन् । धर्तीबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई भिटामिन ‘एन’ नाम दिइएको छ ।
खाली खुट्टा घाँसमा हिँड्नुका फाइदा
घाँसमा खाली खुट्टा हिँड्दा विभिन्न रोगबाट राहत पाउन सकिन्छ।
उमेर बढ्दै गएपछि कतिपयलाई खुट्टा सुन्निने समस्या देखिन्छ। कहिलेकाहीँ उपचार गर्दा पनि सीप लाग्दैन। यसो हुँदा घाँसमा खाली खुट्टा हिँडेर समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ। नांगै खुट्टा हिँड्दा शरीरमा रक्तसञ्चार राम्ररी हुन्छ। अक्सिजनयुक्त रगत शरीरले पाउँछ। जसले गर्दा खुट्टा सुन्निने समस्या हट्छ।
कतिपयलाई निद्रा नलाग्ने समस्याले सताउँछ। जसलाई स्लिपिङ डिसअर्डर भनिन्छ। यस समस्यामा मानिसलाई राम्ररी निद्रा लाग्दैन। तर, नांगै खुट्टा घाँसमा हिँड्दा यस समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। मीठो निद्राका लागि हरेक बेलुका १५ मिनेटजति घाँसमा खाली खुट्टा हिँड्नुपर्छ।
तेजिलो आँखाको ज्योति
मान्छेको खुट्टामा केही प्रेसर प्वाइन्ट हुन्छन्। बिहान खाली खुट्टा घाँसमा हिँड्दा ती प्रेसर प्वाइन्ट दुरुस्त हुन्छन्। घाँसको हरियो रङ हेर्दा आँखाले राहत पाउँछन्। बिहान घाँसमा हुने शीतको थोपा पनि स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ।
मोजाविना जुत्ता लगाउदा के हुन्छ ? जानीराख्नुस् !
धेरै ब्यक्तिहरु गर्मी महिनामा जुत्ता लगाउदा मोजा नलगाउने स्वभावका हुन्छन् । कतिपयलाई मोजाले गर्मी गर्ने हुनाले पनि मोजा सकभर लगाउनै नपरोस् भन्ने हुन्छ ।मोजा नलगाई जुत्ता लगाउनु भनेको स्वास्थको दृष्टिकोणले राम्रो मानिदैन । गर्मी महिनामा पैतालामा संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
बाहिरी तापक्रम र जुत्ता भित्रको तातो प्रत्यक्ष छालामा पर्दा मोजा नलगाउने ब्यक्तिहरुलाई बढी संक्रमण हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले सकभर गर्मी महिनामा पातलो किसिमको भएपनि मोजा लगाएर जुत्ता लगाउनु राम्रो मानिन्छ । गर्मी महिनामा तातोको कारण खुट्टामा विभिन्न किसिमको संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुने हुनाले निम्न कुराहरुमा सावधानी अपनाउनु राम्रो हुन्छ ।
खुट्टाको सरसफाइ गर्ने
आफुलाई धेरै ब्यस्त राख्ने क्रममा धेरैले आफ्नो खुट्टाको सफाईमा ध्यान दिन भ्याइरहेका हुदैनन् । तर तपाईहरुले दिनको न्यूनतम पनि दुई पटक खुट्टाको सफाइका लागि समय निकाल्नै पर्छ । गर्मी महिनामा जुत्तालाई लामो समय लगाउदा पसिनाले दुर्गन्ध हुनुका साथै खुट्टमा संक्रमण हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।
महिलाहरुले गर्मी महिनामा चप्पलको प्रयोग बढी गर्ने हुनाले खुट्टामा धेरै धुलो मौलो रहने गर्छ । यस्तो अवस्थामा औषधिजन्य साबुनको प्रयोग गरेर खुट्टा धुनु राम्रो हुन्छ ।
मोश्चराईजरको प्रयोगले खुट्टालाई नरम बनाउने गर्छ । त्यसैले दैनिक रुपमा सुत्न जानु भन्दा अगाडी खुट्टालाई राम्ररी सफा गरी पुछेर मोश्चराईजर क्रिम राम्ररी दल्ने गर्नु पर्छ ।
कतिपय ब्यक्तिहरुमा गर्मी महिनामा पनि खुट्टा फुट्ने समस्या रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मोश्चराईजरको प्रयोगले खुट्टा फुट्ने समस्यालाई धेरै हदसम्म कम गरेर खुट्टामा हुने पिडालाई पनि कम गर्छ ।
खुट्टामा हुने इन्फेक्सन
गर्मी महिनामा पानी पर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ यस्तो अवस्थामा बढी हिड्डुल गर्ने ब्यक्तिको खुट्टामा फोहोरको मात्रा धेरै भएर बढी संक्रमण हुने सम्भावना रहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा खुट्टाको औंलाको कापाको भाग बढी चिलाउने र सोही भागको छाला च्यातिने समस्या बढी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बेलुका घरमा मनतातो नुनपानीमा खुट्टालाई केही बेर डुवाएर राख्ने । त्यसपछि सुख्खा कपडाले राम्ररी पुछेर पाउडर लगाउदा धेरै नै राहत हुन्छ ।
मोजा अनिवार्य रुपमा लगाउनु
गर्मी महिना हो पैतला धेरै पोल्छ भनेर मोजा नलगाउने चलन बढी रहेको छ । तर तपाईको यो सोचाई गलत हो । गर्मी महिनामा तपाईले पातलो सुतीको मोजाको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । यो वाहेक तपाई लामो समय जुत्ता लगाउनु पर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने हावा पस्ने किसिमको जुत्ता लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
खुट्टाको बिशेष सफाइ गर्न अहिले धेरै ब्यूटिपार्लरहरुमा पेडिक्योरका सेवाहरु पनि संचालनमा रहेका छन् । त्यसैले सातामा वा दुई सातामा एक पटक गएर खुट्टाको पेडिक्योर गर्दा खुट्टामा हुने धेरै किसिमको समस्याहरु कम हुदै जान्छ ।
जुत्ता नलगाए लाइसेन्स जाला
दुर्घटना हुँदै नहोस् । सबैले यही चाहेका हुन्छन् । यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले बेला बेलामा नियम कडा पार्छन् । लाइसेन्समा कडाइ, मापसे जाँच, ट्राफिक नियम पालना आदि ।
यस्तै नियममा अब अर्को थपिएको छ, जुत्ता लगाएर मात्र गाडी चलाउनुपर्ने । दुर्घटना हुन नदिन इलाममा सार्वजनिक यातायातका चालकलाई जुत्ता अनिवार्य गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकले सार्वजनिक यातायातका चालकलाई जुत्ता अनिवार्य गर्ने गरेको हो । दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने भन्दै यस्तो नियम ल्याइएको हो ।
चालकले जुत्ता लगाए/नलगाएको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीले गर्नेछ । जुत्ता नलगाए जरिवानादेखि लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने प्रावधान छ ।
‘जाँचका क्रममा चप्पल लगाएर कुदाउनेलाई सम्झाएर आइन्दा जुत्ता लगाउन भनिरहेका छौंं,’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका इञ्चार्ज पदम राईले भने, ‘अटेर गरे कारबाही प्रक्रियामा जानेछौं ।’
चालकले जुत्ता लगाउनैपर्ने भन्ने नयाँ नियम भने होइन । भइरहेकै सरकारी निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । सवारी चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०६९ को दफा २ मा जुत्ता लगाउनुपर्ने नियम छ ।
‘नियम भए पनि यसअघि कार्यान्वयनको प्रयासै गरिएन,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत देवीचरण फुयालले भने, ‘अब पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ ।’
चप्पल लगाई सवारी चलाउँदा चिप्लिने, असहज हुनेजस्ता कारणले दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिकले पाएको छ । ‘जुत्ता नलगाउनु पनि दुर्घटनाको एउटा कारण देखिँदा भइरहेको नियम कार्यान्वयन गर्न लागेका हौं,’ राईले भने । समितिले जुत्तासँगै चालक परिचयपत्र र सिट बेल्ड पनि अनिवार्य गरेको छ ।
चाडबाडमा यात्रुहरूको अत्यधिक चाप हुने भएकाले आफ्ना सवारीहरू मर्मत गरेर दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएको छ । यात्रु चापलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गर्न थालिएको समितिले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाको अध्यक्षतामा यातायात सेवा कम्पनीका प्रतिनिधिसमेतको बैठकले अग्रिम बुकिङ काउन्टर खोल्नुपर्ने, यात्रुलाई अनिवार्य टिकट दिइनुपर्ने, सवारी साधनमा अनिवार्य डस्टबिन राख्नुपर्ने, लक्षित वर्गको सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने, सवारी चालकहरूले शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने लगायतको निर्णय गरेको छ ।
दसैं–तिहारमा सदरमुकामस्थित बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । फिक्कल र पशुपतिनगरमा पनि सहायता कक्ष खुल्नेछन् । यातायात व्यवस्थापन समितिले निर्णय कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्नेछ  र ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय यातायात व्यवसायीको समन्वयमा अनुगमन गर्ने तयारी भएको हो ।
Don't Miss it दिमागी क्षमता बढाउन चाहानुहुन्छ ? खानुहाेस् दैनिक रूपमा दुध
Up Next चुरोट छाडेकाे २० मिनेटपछि नै देखिन थाल्छन् यस्ता परिवर्तन
योगा र ध्यान गर्नाले हाम्राे स्वास्थ्यमा यस्ताे परिवर्तन साथै क्यान्सरको जोखिम पनि कम, पढाैँ
आजभोली शहरी इलाकामा बस्ने धेरै मानिसहरु मोटोपनाको शिकार भएको पाइन्छ । मोटोपनाको कारण भद्दा भएको शरीरलाई फिट बनाउनको लागि धेरैले…
केहि घरेलु उपायहरू, जसले हात र खुट्टा फुटेको निको हुन्छ
१. चिनीः आधा गिलास चिनी एउटा भाँडामा राख्नुहोस् । त्यसमा चिनीको आधा भागजति मनतातो पानी अथवा ग्लिसिरिन अथवा नरीवलको तेल…
किन चुम्बन गर्न मन लाग्छ सहवासको बेला ?
सम्भोग क्रियामा लज्जाका कारण स्त्री पुरुषजसरी सक्रिय रूपमा सहभागी हुन सक्दिनन् । यसतर्फ पुरुषले भिन्न कुरा गरेर उनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ…
यस्ता छन्, केही खानेकुरा जसलाई शनि देवताले मन पराउँदैनन्
– शनिवारको दिन रातो खुर्सानी पनि नखानुहोस् । रातो खुर्सानी खाँदा शनिदेव रिसाउँछन् । –शनिवारको दिन चना, मास र मुङको…